तिथि मेरो पत्रु »3एक विद्यार्थी बजेट मा डेटिङ राज
म मेरो मिति कसरी प्रभावित गर्छन् र अझै पनि लाँड्री गर्न पैसा?
यो उच्च शिक्षा संसारको सबै विद्यार्थीहरूको लागि एक अहम मुद्दा र सङ्घर्ष हो. यो गत हप्ता म मुश्किल को नितान्त आवश्यक शौचालय कागज किन्न सक्छ, र मेरो कफी लत मेरो वालेट नष्ट खतरा छ. यद्यपि, म लगातार कैफीन को आवश्यकता आसपास नहीं गर्न सक्छन् जस्तै, विद्यार्थीहरू तोड छौं भन्ने तथ्यलाई उम्कन सक्दैन.
एक विद्यार्थीले बजेट मा बाँचिरहेका सजिलो छैन. तपाईं एक भाग समय काम वा आफ्नो आमाबाबुको आर्थिक सहयोग गरेका भाग्यशाली केही को एक होऔं, यो अझै पनि एक चलिरहेको युद्धमा हो. शुक्रबार राति पिज्जा प्रतिरोध विषयमा बुरा बनाउन तर पर्याप्त कठिन छ, त्यहाँ सबै कलेज र विश्वविद्यालय प्रस्ट भन्ने अर्को तत्व हो; डेटिंग.
आफ्नो आकर्षण र अविश्वसनीय राम्रो देखिन्छ तापनि, आफ्नो मिति प्रभावित सामान्यतया यो तपाईंले केही आटा खर्च छौँ. तथापि, त्यहाँ महंगी टनेल को अन्त मा प्रकाश छ. यी तीन रहस्य एक तोडा विद्यार्थी जबकि तपाईं आफ्नो मिति प्रभावित गर्न सक्छन् किनभने आफ्नो भाग्यशाली दिन हो.
साँच्चै नजिक जस्तै ... घर नजिक
कलेज घरबाट आफ्नो घर छ. वास्तवमा, यो शायद अधिक मनोरञ्जनात्मक आफ्नो वास्तविक घर भन्दा छ. यसैले तपाईं आफ्नो सही औंलाहरुमा धेरै लाभ र क्षमता मिति विचार छ.
खाना सिनेमा रात र आदेश. Netflix शाब्दिक कलेज बच्चाहरु को लागि थियो.
कुक सँगै (माइक्रोवेभ खाना पकाउन अझै पनि भाँचिदिन्छ!)
एक बोर्ड खेल खेल्न, कार्ड वा एक भिडियो खेल
सँगै कम्बल फोर्ट निर्माण. हरेक हृदय मा एक बच्चाको, यसलाई अस्वीकार गर्दैन
अधिक Artsy-fartsy युगल लागि, एक शिल्प गर्न वा सँगै रंग
बस सरल कुरा गरेर र cuddling सामान्यतया अद्भुत काम गर्दछ
एक बजेट योजना बनाउन
द्वारा फोटो विधेयक & विकी टी सीसी
तपाईं एक कक्षा मा सबै सिक्न छैन. बजेट योजना को कौशल एक बहुमूल्य र धेरै उपयोगी छ. तपाईं आफ्नो शुरू मा यो तल सक्दैनन् तापनि यो तपाईं आफ्नो मुद्रा बारेमा स्मार्ट हुन मदत गर्नेछ. तल बस्नुहोस्, एक कलम र कागज बाहिर प्राप्त (आफ्नो ल्याप्टप मा या अधिक संभावना बारी) र आफ्नो मासिक लागत अनुमान. यो खाना पनि हुनेछ, मनोरञ्जन, आवश्यकताहरू, स्कूल आपूर्ति, र सबै भन्दा महत्वपूर्ण मिति. तपाईं बाँच्न सक्दैन मात्र के तल राख्न प्रयास. अर्को, सँगै costys थप्न र तपाईं प्रति महिना खर्च गर्न सक्छन् कति को एक परिणामस्वरूप कुल प्राप्त. अब चुनौती आउँछ; यो रकम भन्दा जान प्रयास, र पनि सम्भव भने कम खर्च. अब तपाईं एक साँचो जानेमन हुन सक्छ, अझै पनि पूर्ण रूपमा तोड महसुस बिल लागि तिर्न र छैन.
तपाईंको संसाधन प्रयोग
तपाईंको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति आफ्नो स्रोतसाधन छ. म एक काठ कर्मचारी र दाह्री संग एक सुन्दर दार्शनिक जस्तो लाग्छ तर म होइन. छात्र रूपमा हामी धेरै फाइदा छ. तपाईं वर्ष को शुरुवात मा मिल्यो ती कुपन पुस्तकहरू थाहा र पछि खोलिएको छैन? खैर, तिनीहरूले ... मिति विचार बचत पैसा को पूर्ण राख्छ हुनत छूट टाटु व्यक्तिहरूको सावधान हुन छौं. यो त्यहाँ अन्त छैन. तपाईं स्कूल जाने जहाँ कुनै कुरा, म यति धेरै स्टोर आश्वस्त गर्न सक्छन्, आफ्नो परिसर प्रस्ताव विद्यार्थी छूट वरिपरि रेस्टुरेन्ट र कारोबार. यी मौकाहरू र स्कूल आपूर्ति पैसा बचत, खाना र धेरै. अनगिन्ती सम्झौता हो, केवल विद्यार्थीहरूको लागि सम्झौता र giveaways. एक कुपन रानी वा राजा कुरा होइन बन्ने लज्जित हुन.
यी तीन रहस्य संग, तपाईं अजेय हुनेछ. तपाईं महान् सजिलै संग को डेटिङ संसारमाथि विजयी र अझै पनि पैसा लागि देखाउन मा बाँकी छ सक्छन्. त्यसैले निस्कनेछ र केही हृदय कब्जा र केही पैसा बचत.